Sawirro: Wasiirka Amniga oo Xaruntiisa ka bilaabay daad gureynta dhagxaan lagu xiray wadooyinka - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Wasiirka Amniga oo Xaruntiisa ka bilaabay daad gureynta dhagxaan lagu xiray...
Sawirro: Wasiirka Amniga oo Xaruntiisa ka bilaabay daad gureynta dhagxaan lagu xiray wadooyinka
Muqdisho (Caasimada Online)-Wasiirka Wasaarada Amniga Gudaha Xukuumada Somalia Maxamad Abuukar Isloow Ducaale, ayaa maanta qaaday talaabo dib loogu furaayo wadooyinka magaalada Muqdisho ee dhagxaanta lasoo dhoobay.
Wasiirka ayaa howshiisa Qaran ka bilaabay Xaruntiisa Wasaarada Amniga oo qeyb kamid ah wadada ku xiratay dhagxaan aad u farabadan kuwaa oo la sheegay in looga hortagaayo gaadiidka miineysan oo Maleeshiyada ay ku fuliso Qaraxyada.
Wasiir Maxamad Abuukar Isloow Ducaale, ayaa amar ku bixiyay in dhagxaanta laga qaado wadooyinka magaalada Muqdisho oo lagu kala qeybiyay dhagxaan aad u waaweyn kuwaa oo dhibaato badan ku haya isu socodka Gaadiidka Shacabka.
Wasiir Ducaale, waxa uu sheegay in dadaalka lagu furaayo wadooyinka lagu jaray dhagxaanta uu ka bilaabay Wasaaradiisa waxa uuna tilmaamay in wixii maanta ka danbeeya ay furantahay wadada hormarta Wasaaradda amniga gudaha ee aada isgooyska Jubba.
Wasiir Ducaale ayaa arrin nasiib darro ah ku sheegay in wadooyinka loogu tallo galay shacabka lagu kala jaro dhagxaan, waxa uuna cadeeyay inaanu jiri doonin wado danbe oo dhagxaan lagu xiro.
Waxa uu su’aal ka keenay haddii wado waliba lagu jaro dhagxaan, halka ay isticmaali doonaan dadka shacabka ah, waxa uuna ku baaqay in dhagxaanta laga qaado wadooyinka.